သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမပါသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်သင်၏ကလေး ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုများကသင်၏ Brain On Porn သည်
ဒီနေ့ညစ်ညမ်းမှုဆိုတာတရားမျှတတဲ့အထောက်အထားရှိပါတယ် ဒါလှုံ့ဆော် များစွာအသုံးပြုသူများကသူတို့နှင့်အတူစတင်, သူတို့ကပို arousal ကိုရှာဖွေပစ္စည်းကိုရှာသမျှ porn အမျိုးအစား (s) (နှင့်အတူပျင်းကြီးထွား) မှ habituate ။ ဤသည်ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန် arousal တိုးမြှင့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြကြတယ်။
တရားသဖြင့်စီရင်ထားတဲ့နှိုးဆော်ခြင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲနေသည်နှင့်အမျှဒီ တင်းမာမှုလျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်နှင့်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့နည်းနည်းရှိစေခြင်းငှါ ပင်အရသာ။ အတော်များများသည်ယခင် porn အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးပြီးနောက်, ကြောင်းသတင်းပို့ မသက်မသာဆုတ်ခွာကာလ အစွန်းရောက်ပစ္စည်းများအတွက်မတရားသောယာယီဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်မှာ နောက်ထပ် ပြင်းထန်သော, သူတို့ရဲ့အရသာအစောပိုင်းကအရသာမှပြန်ပြောင်း။ တချို့ကတောင်မှလုံးဝအတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဘို့မိမိတို့အရသာရှုံးသည်။
အလေ့အကျင့် (မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုနည်းပါးလာခြင်း) ကိုလည်း '' ဟုခေါ်သည်သည်းခံနေခြင်း။ " သည်းခံစိတ်သည်တူညီသောနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုရရှိရန်ပိုမိုနှိုးဆွပေးမှုလိုအပ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးသူနှင့်အတူသည်းခံမှု / လေ့ကျင့်မှုသည်တူညီသောမြင့်မားမှုရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများလိုအပ်ကြောင်းပြသသည်။ ဤသည်အသုံးပြုမှုတိုးပွားလာသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများနှင့် ပိုမို၍ လှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်မှုသည်အသစ်သောသို့မဟုတ် ပို၍ အစွန်းရောက်သောလိင်အမျိုးအစားများသို့ကူးပြောင်းခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက, Non-pedophilic porn အသုံးပြုသူများသည် ရှိ ကလေးညစ်ညမ်းဖို့မြင့်တက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း, အမည်မသိဖိုရမ်များအပေါ်မှတ်ချက်ပို့စ်တင်တဲ့အခါမှာ, အထူးလေးနက်စွာသူတို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကြုံတွေ့ဖူးဘူးကြောင်းဖော်ပြ နှင့်အဆက်အသွယ် ကလေးများ။
လက်တွေ့နှင့်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်သည်းခံစိတ်များအတွက်တည်ရှိစဉ်အခါ, ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ထောက်ခံမှုအနည်းငယ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများလည်းရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစာတမ်းများ်ဒီစာမျက်နှာကနေယူထားပါသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 55 လေ့လာမှုများကျော်:
deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာပါသလား (2013) ။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
လက်ရှိလေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ကလေးညစ်ညမ်းလောင်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း nondeviant နှင့် deviant နှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများ, စားသုံးကြသည်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုဖြစ်ဘို့, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကအခြားပုံစံများအပြီးပေါ်ပေါက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်ရပါမည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာကနေအကူးအပြောင်း facilitated လျှင်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ဒီတိုးတက်မှုအကဲဖြတ်ရန်ရန်ကြိုးစားခဲ့ ရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး, deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဤတိုးတက်မှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းမြားတှငျပါဝငျခွငျးအတှကျတစ်ဦးချင်းစီ "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ Quayle နှင့်တေလာ (2003) ကအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူကပိုလွန်ကဲခြင်းနှင့် deviant ညစ်ညမ်းစုဆောင်းစတင်ရာမှ desensitization သို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ် satiation နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုအငယ်အသက်အရွယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုတစ်ဦးချင်းစီညစ်ညမ်း၏အခြား deviant ပုံစံများမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်အကြံပြုထားသည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် pedophilia (2013) (ဗြိတိန်စိတ်ရောဂါနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လက်တွေ့အတွေ့အကြုံနှင့်ယခုသက်သေအထောက်အထားများသုတေသနအင်တာနက်ကိုရိုးရှင်းစွာရှိပြီးသား paedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူသူတို့အားအာရုံကိုဆွဲမထားဘူး, ဒါပေမယ့်ကလေးတွေမရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူရှိသူတို့အကျိုးစီးပွားများ၏ crystallisation မှပံ့ပိုးကြောင်းအကြံပြုဖို့စုဆောင်းနေကြသည်။
ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်သင်ကကလေးညစ်ညမ်းကျူးလွန်သူများ (2013) ကထောက်ပံ့ပေးူးပ ?: လုပျခဲ့ -“ CP Offending for Explanations” အပိုင်းမှ - ဥပဒေရေးရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ကြာရှည်စွာထိတွေ့မှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ (CP) ကိုအသုံးပြုသည် -
ဥပဒေရေးရာပစ္စည်းကနေတိုးတက်မှု။ ကိုးသင်တန်းသားများအဘို့, သူတို့ရဲ့က CP ဖောက်ပြန်တဲ့ဥပဒေရေးရာညစ်ညမ်းဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုနှင့်အလားအလာ desensitisation ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်ထင်ရှား။ , တချို့ကသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ခရီး၏မျှမျှတတအသေးစိတ်တုံ့ပြန်မှုပေး:
ကျွန်မစိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကိုရယူသုံးပြီးနောက်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်း (dehumanizing) မှသာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းကနေ "ဒီတဖြည်းဖြည်းတင်းမာမှု။ ဆိုလိုသည်မှာကလေးကမော်ဒယ် [လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ] အငယ်နှင့်အငယ်မိန်းမ, မိန်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်အစွန်းရောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အခြားကြမ်းတမ်းဘာသာရပ်ကိစ္စဖေါ်ပြခြင်းကာတွန်း။ (ဖြစ်ရပ်မှန် 5164) "
တဖန်တုံ့ပြန်မှုအချို့ရှင်းလင်းစွာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုတိုးမြှင့်အပေါ်အခြေခံပြီး, သားသမီးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုပြန်နှင့်ဆက်စပ် ... ။ ယေဘုယျအား, ဒီဆောင်ပုဒ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတစ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုကြောင်းက CP အတွက်ယခင်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူအချို့သောတူညီ shared တစ်အလားအလာစိတ်ဖိစီးမှုစိတ်သက်သာရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းအရာအလိုက်အုပ်စုတစ်စုမှပိုင်ဆိုင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဘို့, က CP မှတဆင့်တိုးတက်မှုကနေတဆင့်ချဉ်းကပ်ခဲ့ နေဆဲအသုံးပြုရသောညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများ။
Deviant ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: အဆိုပါအစောပိုင်း-စတင်ခြင်းအရွယ်ရောက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုအခန်းကဏ္ဍနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ (2016). ကောက်နှုတ်ချက်:
ရလဒ်များကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညွှန်ပြ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတှေ့အကွုံမြားမှပွင့်လင်းအပေါ်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူ နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်စတင်ခြင်းတစ်ခုသိသာထင်ရှားစွာအငယ်အရွယ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။
သိသိသာသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု vs. ဟောကိန်းထုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းများအတွက်စတင်ခြင်း၏နောက်ဆုံးဖြေဆိုသူ '' Self-အစီရင်ခံအသက်အရွယ်။ ဒါက deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအဆဲဆဲ-freported အရွယ်ရောက်သူသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ် nondeviant များအတွက်စတင်ခြင်းတစ်ဦးနုပျိုအသက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သာ) ညစ်ညမ်းနေ့, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ + မှဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဤတွေ့ရှိချက်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်တစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါ Seigfried-Spellar နှင့်ရော်ဂျာ (2013) ကရေးဆွဲနိဂုံးကိုထောကျပံ့ deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု nondeviant အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအပြီးပေါ်ပေါက်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်။
ယင်းအညွှန်းကိန်းပြစ်မှုများ၏အချိန်မှာလိင်ကျူးလွန်သူများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ခန့်မှန်း (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်သည့်အချိန်တွင်လိင်ကျူးလွန်သူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုစရိုက်လက္ခဏာနှင့်ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်တက်ရောက်သူများသည်ပေါ်တူဂီထောင်ထောင်တွင်အကျဉ်းကျခံအမျိုးသားလိင်ကျူးလွန်သူ ၁၄၆ ဦး ဖြစ်သည်။ Semi- စနစ်တကျတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့် Wilson Sex Fantasy မေးခွန်းလွှာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ထိုတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, ညစ်ညမ်းသူတို့ကိုသူတို့အအပြုအမူတွေကိုစမ်းချင်အောင်, တစ်ဦးအေးစက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကအညွှန်းကိန်းပြစ်မှု၏အချိန်မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကလေးများမပါဝင်ကြောင်းအတင်းအဓမ္မလိင်နှင့် 45% featured ကြောင်း 10% ကိုအသုံးပြုညစ်ညမ်းကတည်းကအရေးပါမှုသည်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းသုံးပြီးတိကျတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအဘို့မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ disinhibit ကူညီစေခြင်းငှါပုံပေါ်ပါတယ်။ ထိုဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆန်းစစ်ရန်မှာဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယခင်ကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ (ဥပမာ Seto et al ။ , 2001) လေ့လာခဲ့သည်။
ခြားနားအချို့လေ့လာမှုများ (Carter က et al, 1987 ။ D'Amato, 2006) ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်ညစ်ညမ်း၏ "catharsis" အခန်းကဏ္ဍမှညွှန်ပြနေချိန်တွင်, t ကိုဦးထုပ်အချို့ပြုလုပ်ရန်မလုံလောက်ဘူးသောသူတို့ကိုမြင် contents တွေကိုမျိုးပွားဖို့ကြိုးစားလုပ်ကတည်းကအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အတန်းတူဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုလိင်ကျူးလွန်သူများအတွက်ကုသမှုနည်းဗျူဟာများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဆရာ ၀ န်များအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများကိုကျူးလွန်ခြင်းမပြုမီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အကြမ်းဖက်မှုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (Kingston et al ။ , 2016) ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ကလေးသူငယ်လိင်အမြတ်ထုတ်ခြင်းပစ္စည်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုများ (CSEM) စားသုံးသူတွေ: ပြင်းထန်မှုကျော်အချိန်လေးပုံစံများ (2018) - လေ့လာမှု 40 ၏ hard drive တွေကနေထုတ်ယူ data တွေကိုတစ်ဦးချင်းစီပြစ်မှုထင်ရှားသုံးပြီး, ကလေးညစ်ညမ်း၏စားသုံးသူများ၏လှုပ်ရှားမှုအချိန်ကျော်ဆင့်ကဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အများဆုံးပျံ့နှံ့ပုံစံတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ အသက်အရွယ်အတွက် drop အဆိုပါပုံဖော်လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ စှထ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှု။ အဆိုပါသုတေသီများဆွေးနွေးရန် လေ့ နှင့် တင်းမာမှုလျှော့ချအဖြစ်စာပေ porn စုဆောင်းအဆက်အသွယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူထက်ပိုမိုလွန်ကဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်ပြီဆန္ဒပြနေသော။ ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါ collection များကိုများ၏ 37.5% [Extreme] ရမှတ်အသက်အရွယ်နှင့် COPINE နှစ်ဦးစလုံး၏စည်းကမ်းချက်များ၌တိုးမြှင့်ပြင်းထန်မှုပြ: ပုံဖော်သားသမီးတို့သည်ငယ်ရွယ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ပြုမူသောအမှုကိုပိုမိုလွန်ကဲဖြစ်လာခဲ့သည်။
... [တစ်ဦးကစက္ကန့်ပုံစံခဲ့သည်] အားဖြင့် ... အ COPINE တစ်ခုတိုးလာ [Extreme] ရမှတ်နှင့်ဘာသာရပ်များများ၏အသက်အရွယ်အတွက် ... ပုံအော။ ဒီပုံစံ [တစ်ခုအပိုဆောင်း] 20% အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
... ဒါဟာလူအပေါင်းတို့သည်ကလေးညစ်ညမ်း collection များကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာပါဝင်သည်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။
... လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောဒုတိယအချက်မှာစုဆောင်းသူများသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလေ့ရှိကြသည်, အရာပုံစံများ 1, 2, နှင့်လက်ရှိလေ့လာမှု3နှင့်အတူကိုက်ညီသော။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာပိုမိုဆိုးရွားသည့်အကြောင်းအရာအသစ်များကိုရှာဖွေရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတိုင်းအတာကိုထိန်းသိမ်းရန်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေများကိုစုဆောင်းသူများသည်အခြားအသက်အရွယ်အမျိုးအစားများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလေ့လာရန်မောင်းနှင်နိုင်သည်။
...တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများတွင် CSEM စုဆောင်းသူများသည်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာစူးစမ်းလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအာဟာရဖြည့်တင်းရန်တရားမ ၀ င်အကြောင်းအရာအသစ်များကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်မှုခံရနိုင်သည်။ ဤရှင်းပြချက်သည် Babchishin et al ။ ၏ (၂၀၁၅) meta-analysis နှင့်သဘောတူညီသည်။ အွန်လိုင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည်အော့ဖ်လိုင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပိုမိုများပြားကြောင်းဖော်ပြသည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စတင်ခြင်း၏အခြေခံအကြောင်းရင်းများ (၂၀၂၀) - လေ့လာမှုအသစ်အရကလေး porn (CP) အသုံးပြုသူအများစုသည်ကလေးများအားလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုလေ့လာပြီးနောက်မှသာအသစ်သောအမျိုးအစားများနောက်မျိုးဆက်သစ်များကိုလေ့ကျင့်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်အစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများ၊ သုတေသီများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏သဘောသဘာဝကိုပြသသည် (ပြွန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်အဆုံးမဲ့အသစ်စက်စက်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကို CP ကဲ့သို့သောအစွန်းရောက်သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါဝင်နေသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
အင်တာနက်၏သဘောသဘာဝသည်နောက်ဆုံး၌မြင့်တက်လာရန်အတွက် pedophiles များအားအားပေးမှုတိုးပွားစေသည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင် CP ကြည့်ရှုခြင်းစတင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အမျိုးသားများ၏ကိုယ်ပိုင်ခွဲခြားထားသောစိတ်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုဆွေးနွေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်အနေဖြင့်ဤအပြုအမူကိုအထောက်အကူပြုသောထူးခြားသောအချက်များကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်ဟုယခင်အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများကြောင့်အင်တာနက်အခြေပြုလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုအထူးအာရုံစိုက်သည်။ (Quayle, Vaughan, & Taylor, 2006)
သင်တန်းသားများစွာကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလိင်စိတ်စိတ်ဝင်စားကြောင်းတင်ပြရာတွင်၎င်းတို့အား 'မညီကြောင်း' သို့မဟုတ် 'အစွန်းရောက်' ဟုဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့သည်ရိုးရာလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်အပြုအမူများဟုသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်သွားသည်ဟုဆိုလိုသည် ဥပမာအားဖြင့် Mike သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများဖြစ်သရွေ့ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာမှန်သမျှကိုရှာဖွေခြင်းကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုမကြာခဏအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်အစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဤလိင်မှုကိစ္စများသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်များအရတုန့်ပြန်ခြင်းအားတားမြစ်သည့်အနိမ့်အမြင့် (ဥပမာရိုက်ခြင်း၊ transvestism) စသည်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ပုံ ၁ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အချို့သောပါဝင်သူများအတွက်တရားမ ၀ င်သော၊ သို့သော်ယဉ်ကျေးမှုမရှိသောအပြုအမူများ (ဥပမာ incest, bestiality) အပါအ ၀ င်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလေ့အကျင့်ပြုပြီးနောက် CP ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဂျေမီဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း“ ငါ BDSM ကိုကြည့်ပြီးနောက်မှပိုပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအရာများနှင့်အခြားမညီမညာဖြစ်နေသောအရာများကိုရတော့မည်။ ငါထုမယ်” CP သည်တရားမ ၀ င်မှုသည်အမှန်တကယ်တွင်အချို့သောသင်တန်းသားများကိုနှိုးဆွမှုတိုးပွားစေခဲ့သည်။ “ ငါလုပ်နေတာဟာတရားမ ၀ င်ဘူးလို့ခံစားရတယ် သင်မလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့
ဤအခြေအနေသည်လိင်မှုနှိုးဆွသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွင်တခါတရံတွင်ပါဝင်သူများကမညီမညာဖြစ်နေခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်တရားမဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ယခင်တွေ့ရှိချက်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုတားဆီးနိုင်သည့်အချက်များကိုလူတို့အားလျစ်လျူရှုရန် visceral ပြည်နယ်များကလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟု (ယခင်သုတေသနပြုချက်အရ) ဤတွေ့ရှိချက်ကိုထောက်ခံခဲ့သည် (Loewenstein, 1996) ။ …။ ပါ ၀ င်သူများသည်ဤအထူးအာရုံစူးစိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုတွင်မရှိတော့သောအခါသူတို့ကြည့်ရှုခဲ့သည့်စီပီသည်မနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု Quayle နှင့် Taylor (၂၀၀၂) မှအစီရင်ခံသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ပါဝင်သူများကရှင်းပြသည်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သော (တရားဝင်) အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်မဝင်စားကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် အကျိုးဆက်အနေဖြင့်သင်တန်းသားများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်လှုပ်ရှားမှုအသစ်များပါ ၀ င်သည့်လိင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုစတင်ရှာဖွေလိုကြသည်။ အင်တာနက်ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်သူများ၏ပျင်းခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအသစ်များကိုလိုလားခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုပုံရသည်။ အင်တာနက်၏ကျယ်ပြန့်မှုကအဆုံး၌အပြာစာပေရုပ်ပုံများရှိခြင်းကိုသူတို့စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်စေနိုင်သည် ကြည့်စမ်း။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြရာတွင်ယောဟန်က
ဒါကပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေလိုမျိုးအရာပဲ။ ဒါကနည်းနည်းမှိုင်းသွားတယ်။ ဒါဆိုမင်းကလိင်တူချစ်သူတွေအတွက်ခဏတာကြည့်တာပေါ့၊ နည်းနည်းမှိုင်းလာပြီ၊ ပြီးတော့စပြီးစလေ့လာတယ်။
Desensitization (လေ့) တင်းမာမှုကို ဦး တည်:
၀ တ္ထုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသူများအနေဖြင့်ယခင်ကကြည့်ရှုခြင်းထက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ မိတ်ဖက်များ၊ အခန်းကဏ္, များ၊ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး (သတိရှိရှိသို့မဟုတ်မသိစိတ်ဖြင့်) ၎င်းတို့သည် 'လက်ခံနိုင်ဖွယ်' ဟုယူဆသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသို့မဟုတ်တရား ၀ င်နယ်နိမိတ်များကိုအနည်းငယ်တိုးချဲ့ခြင်းကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ သူ Mike ရှင်းပြသကဲ့သို့ "သင်ကနယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနယ်နိမိတ်တွေကိုဖြတ်ကျော်နေတယ် - 'မင်းအဲဒီလိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး' လို့မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသင်လုပ်လိုက်တယ်။"
သင်တန်းသားများစွာကနောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်တူညီသောနှိုးဆွမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရရှိရန်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး Mike နှင့်အခြားသင်တန်းသားများဖော်ပြခဲ့သောတိုးတက်မှုသည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြသည်။ Justin ကရှင်းပြသည်မှာ“ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူအများက CP မရှာမီမရေတွက်နိုင်သောအမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ယခင် CP သုတေသနများနှင့်ဆင်တူသည်၊ ဥပဒေအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကို စတင်၍ တရားမဝင်သောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်းသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခြင်း၊ ထိတွေ့မှုနှင့်ပျင်း (Ray et al ။ , 2014) ။
အလေ့အကျင့် CP ကို ​​ဦး တည်:
ပုံ ၁ တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းသင်တန်းသားများသည် CP ကိုမတက်ကြွမီအသစ်အဆန်းနှင့်လေ့ကျင့်မှုအကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်စီးနင်းခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားအသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ပါဝင်သူများသည်ဤသဘောသဘာဝကိုရှာဖွေခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းများကိုနာရီပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဤအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှာအလွန်အကျူးများနေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားသည်လိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအတော်အတန်မပေးတော့ဘဲသူတို့ကိုအသစ်သောလိင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုရှာဖွေခြင်းကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်စေသည်။
ပထမတော့ငါငြီးငွေ့တယ်ထင်တယ် ငါစိတ်ဝင်စားတဲ့အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ ငါအလွယ်တကူရနိုင်တယ်။ မသိဘူး၊ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုသုံးမယ်၊ ငါစိတ်မဝင်စားဘူး၊ ငါအရမ်းမြင်ခဲ့ရပြီ - ထို့နောက်ငါပိုပြီးပေါ်သို့ရွှေ့ချင်ပါတယ်။ (ဂျေမီ)
ငါကအင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုပထမဆုံးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုစပြီးစတင်လေ့လာခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကလေးများကိုဆက်လက်လေ့လာခဲ့သည်။ (ဘင်)
လေ့ကျင့်ခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အခြားစိတ်ပညာနယ်ပယ်များတွင်ကောင်းစွာတည်ရှိပြီးယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Elliott နှင့် Beech တို့ကဤဖြစ်စဉ်ကို“ ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသောလှုံ့ဆော်မှုများသို့နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည်သူတို့၏နိုးကြားမှုအဆင့်များကိုကျွေးမွေးရန်အချိန်နှင့်အမျှပိုမိုအစွန်းရောက်သောပုံရိပ်များကိုရှာဖွေရန်အလားအလာရှိသည်” Elliott သည်နှင့် Beech, (2009, p ။ 187) ။
အခြားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများနည်းတူ CP နှင့်ထိတွေ့မှုကနောက်ဆုံးတွင်သင်တန်းသားများကိုကလေးသူငယ်များကိုလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုတင်ပြသောသင်တန်းသားများအပါအ ၀ င်ဤအကြောင်းအရာများကိုလေ့ကျင့်ရန် (နောက်ဆုံးတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများကိုလေ့လာသူများကဲ့သို့) ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်သင်တန်းသားများကိုဤစာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်မူလခံစားခဲ့ရသည့်တူညီသောနိုးကြားမှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်အငယ်သားများနှင့် / သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်လိင်ဆိုင်ရာပုံဖော်မှုများကိုပါ ၀ င်သော CP ရှာဖွေခြင်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်စေသည်။ Justin ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း“ မင်းကိုမီးပွားလေးတစ်ခုခံစားရစေမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုမင်းရှာဖို့ကြိုးစားတယ်၊ သငျသညျအငယ်နှင့်အငယ်ရသကဲ့သို့, ပြု၏။
အချို့သောသင်တန်းသားများသည်၎င်းတို့သည် CP ကိုရှာဖွေရန်စတင်ခဲ့ခြင်းမှာယခင်ကငယ်လွန်းလွန်းသောကလေးများအတွက်နှိုးဆွရန်ကလေးငယ်များနှင့်ပါ ၀ င်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။ Travis က“ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမော်ဒယ်တွေကအသက်ငယ်လာတယ်။ အရင်တုန်းကငါဟာအသက် ၁၆ နှစ်အောက်မှာဘာမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးဘူး” ဟုမှတ်ချက်ချသည်။ အခြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲပါဝင်သူများကဤအကြောင်းအရာများအားနှိုးဆွမှုလျော့နည်းသွားပြီးနောက်တွင်ပင် CP ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်တင်ပြခဲ့သည်မှာအထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကဤအပြုအမူကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အခြေအနေဆိုင်ရာအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများပေါ်ပေါက်စေသည်။
CP ကြည့်ခြင်းမပြုလုပ်မီကလေးတွေနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုယခင်ကမသိရှိခဲ့ကြသောပါ ၀ င်သူအများအပြားကဤပစ္စည်းများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည်ကလေးများအားလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအားဖြင့်၎င်းအား 'အခြေအနေ' ဖြစ်စေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
သင်တန်းသားများအားလုံးနီးပါးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်လိုကြောင်းတင်ပြခဲ့ကြသောကြောင့်ဤဖြစ်စဉ်သည်သင်တန်းသားများကိုကလေးသူငယ်များ (နှင့်ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတိုးမြှင့်ခြင်း) ထက် CP ကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာစေရန်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ကဒီအေးစက်ဖြစ်စဉ်ကိုရိပ်မိပုံကို၏ကွဲပြားဖော်ပြချက်ပေးခဲ့သည်:
မင်းကဂျင်ပထမဆုံးစင်တဲ့အခါ၊ မင်းထင်တာက "ဒီဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်" လို့မင်းထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းဆက်သွားပြီးနောက်ဆုံးတော့ဂျင်ကိုကြိုက်လာပြီ။ (ယောဟန်) ။
ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲကလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့၊ ကလေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုငါကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆားကစ်တွေ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တာတွေကငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်။ (ဘင်)
CP ကိုသူတို့ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာသည်နှင့်အမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပါကြည့်ရှုခဲ့ကြသောသင်တန်းသားများသည်လူကြီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုနှိုးဆွရန် ပို၍ ခက်ခဲလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်၊ ဤအေးစက်မှုဖြစ်စဉ်သည်အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောလေ့ကျင့်ခန်း၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။ သို့သော်ကလေးများအားလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိသောသူများအတွက် CP ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သူများအနေဖြင့်ဤစာရွက်စာတမ်းများကိုအစဉ်အမြဲလေ့ကျင့်နေခြင်းအကြားအေးစက်မှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်များထဲမှတစ်ခုမှာပါ ၀ င်သူများသည် CP မှတိုးတက်မှု 'ဖော်ပြခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့နေထိုင်ရာနေရာများနှင့်ဤပစ္စည်းများအပေါ်တုန့်ပြန်မှုလျော့နည်းလာခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ဤအမူအကျင့်မှရပ်တန့်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပါ ၀ င်ဖြေဆိုသူအချို့ကသူတို့၏ CP ကိုအသုံးပြုခြင်းကို 'မဖြစ်မနေ' သို့မဟုတ် 'စွဲလမ်းမှု' အဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ Travis ဖော်ပြသည့်အတိုင်း:
စွဲလမ်းမှုလိုမျိုးတစ်ခုခုရှိလားမသိဘူး။ မင်းဘယ်မှာမလုပ်ချင်တာလဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုထပ်ခါတလဲလဲစစ်ဆေးခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ ... ငါနှောင်းပိုင်းတွင်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ် ငါပြန်သွားပြီးစစ်ဆေးဖို့လိုလို့ပဲ။
သို့သော်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှ CP ၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါဤအပြုအမူသည်ရိုးရာအသုံးပြုမှုတွင်စွဲလမ်းမှုမဟုတ်ဟုအကြံပြုခြင်းသည်အစစ်အမှန်စွဲလမ်းမှု - အပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
လေ့ကျင့်မှုကြောင့်အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေခြင်းသည် CP ကြည့်ခြင်းထက် ပို၍ နှိုးဆွသည်။
ဤ 'မလှူဒါန်း' ခြင်း၏ထင်ရှားပြသမှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကထင်ဟပ်သည်။ ပါဝင်သူများအားလုံးနီးပါးသည် CP ကြည့်ရှုခြင်း၏မူလလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ပင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအသစ်များအတွက်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ဤပစ္စည်းများအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုအစားထိုးခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုထားသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ်အရသင်တန်းသားများသည် CP ကိုရှာဖွေခြင်း၏လုပ်ရပ်ထက် CP ရှာဖွေမှုကိုပိုမိုနှစ်သက်လာသည်ကိုဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ အကြောင်းမှာသင်တန်းသားများသည် CP ကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေခြင်းအဆင့်သို့ရောက်သော်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားအများဆုံးဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (နှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းများ) သည်သူတို့လိုချင်သောပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုနှိုးဆွရန်အလုံအလောက်မညီမညာဖြစ်နေသောသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းပြင်းထန်သောလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများအားပconိသန္ဓေယူခြင်းမရှိတော့ပါ။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ တ္ထုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားအလွန်အမင်းနှိုးဆွခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းတို့သည်ဤအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းအပေါ်ခံစားခဲ့ရသောခံစားချက်များထက်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည်ပါဝင်သူများ၏ CP ကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်လိုသောဆန္ဒ (ထုံးတမ်းစဉ်လာအရတောင်မှပင်) အားအရှိန်မြှင့်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားပြင်းထန်စွာနှိုးဆွနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းသည်သင်တန်းသားများအနေဖြင့်ဤအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိအားပေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် Dave ဖော်ပြသည့်အတိုင်း -
ငါ [image / video] ကနေနောက်တစ်ခုကိုလှန်လိုက်ရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတစ်စကိုကြည့်လိုက်ရင်ရပြီ ပျင်းစရာကောင်းပြီးငါနောက်တစ်ခုကိုသွားရတော့မယ် ထိုအတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ဘဝကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။
အမေရိကန်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားများအတွက်သက်တမ်းတစ်လျှောက် Deviant Sexual Fantasy ကို attenuation (၂၀၂၀) လေ့လာမှုအရ ၁၈-၃၀ နှစ်အရွယ်အုပ်စုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး ၃၁ မှ ၅၀၊ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် porn အသုံးပြုမှုအမြင့်ဆုံးနှုန်းထားရှိတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုဟာဘယ်သူတွေသုံးပြီးကြီးပြင်းလာတာလဲ ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံစည်မှုအမြင့်ဆုံးနှုန်းထားများ (မုဒိမ်းမှု၊ fetishism၊ ကလေးသူငယ်များနှင့်လိင်) ကိုအစီရင်ခံပါ။ ဆွေးနွေးမှုကဏ္fromမှကောက်နုတ်ချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ကလေးများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများအားအသက် ၃၀ ကျော်သူများထက်အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများတိုးများလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှင်းပြနိုင်ခြင်း အငယ်ယောက်ျားတို့တွင်စားသုံးမှု။ သုတေသီများတွေ့ရှိချက်အရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ၄၅% မှ ၆၁% အထိမြင့်တက်လာသည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအနေဖြင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားသောသက်ကြီးရွယ်အိုအုပ်စုများအတွက်အနိမ့်ဆုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း (Price, Patterson, Regnerus, & Walley, 1970) ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဆွီဒင်လူငယ်အရွယ် ၄၃၃၉ လူငယ်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏သုံးပုံတစ်ပုံမကအကြမ်းဖက်မှု၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကလေးငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း (Svedin, Åkerman, & Priebe, 45) ကတင်ပြခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလေ့လာမှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုယခုလေ့လာမှုတွင်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာတွင်အနှစ် ၃၀ အောက်လူငယ်များသည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ ၅၁ နှစ်ကျော်သူများထက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့် ပို၍ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ပိုပြီးလူမှုရေးအရလက်ခံခဲ့သည် (ကာရိုး et al ။ , 30) ဖြစ်လာသည်။
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ - အမျိုးအစားများ၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း (၂၀၂၀) - စိတ္တဇသည် pedophiles မဟုတ်သောကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသွင်သို့ကူးပြောင်းသွားသည်ဟုဆိုနေပါသည်။
အွန်လိုင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအပေါ်အလင်းဖြာရန်ဤအခန်းသည်ကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအုပ်စုငယ်များနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနကိုအကျဉ်းချုံးထားခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းဆိုင်ရာပြonlineနာများနှင့်အွန်လိုင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုအဓိကဖော်ပြထားသည်။ ကလေးသူငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်သူများ (CSEM)၊ ကလေးသူငယ်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအုပ်စုသုံးစုအတွက်အဆိုပြုထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြစ်မှုကျူးလွန်သူအမျိုးအစား၏အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်စိတ်ရင်းနှင့်အပြုအမူများအစုတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အချို့သောအမျိုးသားများအတွက်တရား ၀ င်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည် CSEM မတိုင်မီဖြစ်သည်။ သို့သော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တရား ၀ င်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင် CSEM ကိုအသုံးပြုသည်။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်များအများစုကုသမှု၏ခြုံငုံပြင်းထန်မှုနှင့်အချို့သောတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူအဆက်အသွယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်ရှိပြီးသားအစီအစဉ်များ၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
နော Church ဘုရားကျောင်းကဒီဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်မည်သူမဆိုကလေးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Watch မလား?